Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Inani elinye leApp eSelula kwiVenkile yeApple eSaudi Arabia
I-360VUZ, i-app ehamba phambili yokuntywila yentlalontle ilinganisa imisebenzi yayo ngakumbi eRiyadh, eSaudi Arabia eneofisi enkulu kunye neqela laseSaudi leenkwenkwezi.
Njengenxalenye yesicwangciso sayo sokukhula, iofisi ye-360VUZ yaseSaudi iya kugxila ekuphuhliseni ishishini, ukwakha iteknoloji yokuntywila yakutshanje, kunye nokuqalisa intsebenziswano entsha ukwenzela ukwakha kwi-metaverse kwaye inikeze umxholo wevidiyo okhethekileyo kunye nokuntywiliselwa kwentlalo kwiqonga layo ngelixa lixhasa umbono we-2030.
U-Khaled Zaatarah, umsunguli kunye neGosa eliLawulayo eliyiNtloko, i-360VUZ uthe: "Sivuyiswa kakhulu ukuvakalisa ukunyusa imisebenzi yethu e-Saudi Arabia ukwakha i-Metaverse, kwaye siqinisekile ukuba iya kukhawuleza isantya sethu sokukhula." Wongeza: "I-360VUZ ibekwe njengeyona nombolo yokuqala yefowuni kwiVenkile ye-Apple eSaudi Arabia kwiveki ephelileyo, ebonisa ukuba iSaudi Arabia yeyona ndawo ifanelekileyo yokwandisa ishishini lethu kwaye siqhubeke nokuzisa umxholo omtsha wokuntywila kubasebenzisi bethu."
I-360VUZ inezivumelwano ezininzi eSaudi Arabia kwaye isandula ukusebenzisana kutshanje neSaudi Professional League (SPL) eyona ligi yebhola ekhatywayo ebukelwe kakhulu kulo mmandla, ibonelela ngamava antywilayo kubathandi bebhola ekhatywayo, ibenza bakwazi ukubukela amanqaku aphezulu emidlalo yebhola ekhatywayo ye-SPL, ngasemva. -i-scenes iividiyo, kunye nodliwano-ndlebe olukhethekileyo kunye nabadlali bonke kumava angama-360 antywilayo kunye nokunxibelelana.
I-app yeselula inyuse i-10 yezigidi zeedola ukuya kuthi ga ngoku kubatyali-zimali abaphezulu bamazwe aphesheya abanjengoKnollwood, Impact46, AlTouq Group, Shorooq Partners, KBW Ventures, Media Visions, Vision Ventures, Hala Ventures, 500Startups, Magnus Olsson, Samih Toukan, Jonathan. I-Labin, i-DTEC Ventures, utyalo-mali lwe-DAI, i-Al Falaj, i-Plug kunye ne-Play Ventures, intsapho yakwa-Al Rashid ngaphezu kwe-strategic angel investigative.
"I-360VUZ inombulelo ngenkxaso yabatyalo-mali baseSaudi ababexhasa kakhulu kwi-buildup efana ne-AlTouq Group, i-Impact46, i-KBW Ventures, i-Vision Ventures, i-AlRashid, kunye ne-Hala Ventures," uZaatarah wongezelela.
I-360VUZ isayine izivumelwano kunye nabaqhubi be-telecom abangaphezu kwe-38 abavela kwihlabathi jikelele ezigubungela iimarike ezifana neMalaysia, i-Indonesia, iSingapore, iSaudi Arabia, i-Kuwait, iTurkey, i-United Arab Emirates, i-Egypt, iPakistan, eMzantsi Afrika kwaye ngoku iyanda kumazwe ngamazwe ukuba ibe yinkokeli Imetaverse yokwenyani kunye neyona app iphambili yokuntywiliselwa kwiselfowuni kunye nethala leencwadi elikhulu elintywilayo emhlabeni.